Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Adriano Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; 'Eze Ukwu'. Adriano Ụmụaka Akụkọ nke ya na akụkọ na-adịghị mma akụkọ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu amara, ndu ndu ya na otutu ihe omuma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere egwuregwu ya na-eme ike ma mana ole na ole na-ele Adriano biography akụkọ nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka ịmalite.
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Ndụ mbido
Adriano Leite Ribeiro mụrụ na 17th ụbọchị nke Feburary, 1982 na Rio de Janeiro, Brazil site n'aka Rosilda Ribeiro (nne) na Almir Leite Ribeiro (nna).
Adraino biri ndụ nwata dị ka nwata n'okporo ámá Brazil si n'ezinụlọ dara ogbenye. Kemgbe ọ dị afọ iri na ụma, ọ nwere mmasị n'ịgba bọl ma soro ndị enyi ya na-egwuri egwu. Mgbe ọ bụla n'ụkwụ, ọ bụ na unyi mara ụlọikwuu nke “Ordem e Progresso” - ndị otu obodo, ebe ọ malitere na football.
N'oge ọ bụ nwata, ịkpọ bọl bụ nanị ihe egwuregwu “Nwa popcorn” aha otutu Adriano meriri ndi oru ibe ya n'ihi na nne nne ya na-acho ya na njedebe nke ubi (mgbe nile n'oge ndi ozo) iri ahihia nke juru ya.
Football bụ naanị talent dị ka nwatakịrị. Ọchịchọ nwata ya bụ ịba ọgaranya na inwe nnukwu ụgbọ ala. Nrọ a mere ka ịchọọ ịgba bọlbụ nke ọma. Ezinụlọ ya nyeere ya aka. Adriano nwere nkwado nke onye ọ bụla nọ n'ụlọ nke na-achụ onwe ha n'àjà ka otu ụbọchị bụrụ onye na-agba bọl.
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Malite Ọrụ
Adriano malitere ọrụ ya na 1999 na Flamengo's youth team.
N'ihi ụbụrụ ya (nnukwu na ike), ọ malitere igwu egwu dịka onye nchebe aka ekpe tupu ya agbanwee gaa n'ihu, ezi ọnọdụ ya. Adriano nwetara ọkwá dị elu n'ogologo otu afọ mgbe e mesịrị ekele maka ike ya na ikike ịgba ụkwụ.
N'ikwu nke a, ọ na-esite n'egwuregwu ndị ọzọ na ndị iro ya pụọ ​​site na ịdị elu ya na ụtọ nke ịgba ọsọ mgbe bọl ahụ gasịrị.
N'agbanyeghị na ọ bịanyere aka na Flamengo nkwekọrịta afọ abụọ na June 2000, ọ nwetara njem na Inter Milan maka oge 2001-02. Inter rere ọkara ọzọ nke Vampeta na PSG (n'ikpeazụ ka Flamengo si PSG maka ego a na-akọwaghị) maka € 9.757 nde maka mgbanwe maka Adriano bụ onye e kwuru na € 13.189 nde.
N'agbanyeghị na ọ bụ nwata, na-enweghị uche na n'amaghị àgwà na ọbụna asụsụ ndị Ịtali, adriano kwadoro mgbe ọ na-abịa site na onye ọ bụla ọzọ Ronaldo de Lima, “Ihe ịtụnanya”. Enyemaka ya nyere aka na mmegharị Adriano na Europe.
Dị ka Adriano si kwuo, "Ronaldo de Lima nyere m ihe ngosi banyere otu esi eme omume na pitch iji merie ìgwè mmadụ ahụ. Mmụọ egwuregwu ya dị oke mkpa iji mee ka m nwee obi iru ala. O mere ka m kwụsị iso ndị inyom na-anọkarị na họtel ndị Italiantali. ”
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Na-eto Eto
Onye na-eto eto Brazil mere ihe ijuanya na mbụ ya na ejiji Inter. Mgbe ahụ, o nwere nọmba 14 n'azụ ya. Ọkọ akụkọ ya bịara mgbe ọ na-egbu ihe gbara ọgharị 200 km / h. Site n'oge ahụ gawa, ndị Fans hụrụ akụkọ ifo Ronaldo. Ha ngwa ngwa akpọ ya dị ka Onye Ọhụụ ọhụrụ. Ha hụrụ onye nwere àgwà ndị ahụ Ronaldo Luis Nazario de Lima. Adriano malite n'ụbọchị ahụ nọgidere na-egosi ya klas, ọsọ, ike anụ ahụ, dribbling, na n'ezie, ike gbaa.
"Popcorn" nke nwata ghọrọ ihe amara karịa 'tank' na 'Emperor'. O mechara merie ndị Itali nile na ụdị egwuregwu ọ na-egwuri egwu ma gbaa ihe mgbaru ọsọ na-akwado ya.
Aha ya kwụsịrị na nkwụda nke ọdịda ya nke dị n'ime ogologo oge a.
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Ndụ Ezinụlọ
Adriano si n'ezinụlọ dara ogbenye ma nwee obere ego. Nna ya Almir, malitere dị ka onye ọrụ ụlọ ọrụ na onye ọrụ ntanetị. Ọ na-ege ntị mgbe niile ọchịchọ Adriano. Ọ bụ onye ga-enwe mwute ụbọchị niile n'ihi na ọ nweghị ego iji zụta uwe nwa ya hụrụ n'anya nke ukwuu.
Nna Adriano- Almir.
Adriano na-echeta nna ya gwara ya otu oge "Nwa, enweghị m ike inye gị onyinye dị oke ọnụ, mana m ga-enye gị otu egwuregwu bọọlụ". O juru onye ọ bụla anya na papa ya nyefere ndụ ya niile, gaa iku agụụ ka ọ hụ ọrụ nwa ya nwoke.
"Enwere m ike ịsị na ọ bụ ebe ahụ ka m malitere ịghọ onye na-agba bọl," ka Adriano na-echeta, bụ onye na-ahụ maka aha Hang na asọmpi obodo.
Almir Leite Ribeiro nwụrụ ụbọchị ole na ole mgbe nwa ya nwoke meriri Copa América na 2004. A chọtara ya nwụrụ n'ụlọ ya na Barra, ọdịda anyanwụ nke Rio n'ihi ọdịda Imeju.
Nne: Rosilda Ribeiro gbalịsiri ike ịhụ nwa ya nwoke ka ọ malitere ịmalite ọrụ ya. Ọ malitere dị ka onye ọrụ ụlọ ọrụ akwa na onye na-ehicha ụlọ. Foto dị n'okpuru ebe a na-egosi Adriano ya na nne ya na nne nne ya, nne abụọ na-etinye n'ụdị.
Mama Adriano (Rosilda Ribeiro) na nne nne (Vanda).
Nne Nne nne: Nne nne Adriano, Vanda nke dị n'elu nyere aka site na ire swiiti, popcorn na anụ oriri n'okporo ámá. O nyere onyinye ego ya niile iji nyere Adriano aka.
Nwanna: Thiago Ribeiro Almir Leite Ribeiro bụ nwanne Adriano nke ọ tọrọ.
Thiago Ribeiro Almir Leite Ribeiro- Nwanne Adriano.
Di na nwunye a enweela oge buru ibu. Ha na-ejikọta nke ọma dị ka a hụrụ na eserese dị n'okpuru ebe a.
Adriano na Thiago Bonding.
Ogbenye Thiago Ribeiro bụ naanị 5 afọ mgbe nna ya nwụrụ. Nwanne Hadrian, Emperor, choro ije ije nke aka ya. “Ọ dị mma n’ihi na ọ bụ aha nwanne m nwoke meriri, mana aghaghị m ịgba mgba nke ukwuu iji nweta aha ahụ. Echere m na m dị obere ma a gaghị akpọ m ya, “eme ka onye ọkpụkpọ ahụ mara, onye natara akara aha ya mbụ na U-18 Dallas Cup, site Cedar Stars Academy, New Jersey, ebe ọ na-amụ ihe.
N'ezie, Adriano na-enwe obi ụtọ maka nwata nke na-eme nke ọma na football.
Thiago- Adriano Kwalitero Ka Bịa.
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Mmekọrịta Ndụ
Joana Machado mere ka ndị mgbasa ozi lebara anya na 2008 na-esochi mmekọrịta ya na Adriano nke ejiri ihere na iwe iwe mara.
Ọ bụ onye na-ese onyinyo foto nke Brazil na nke eziokwu nke telivishọn, nke a ma ama maka ịbụ onye mmeri nke oge nke anọ nke nsụgharị Brazil. Ha abụọ lụrụ di na nwunye ma kewapụ onwe ha iche n'ihi nnukwu nsogbu alụmdi na nwunye.
Adriano Ex Nwanyị na Onye Mmekọ.
Adriano bụ nna nke ụmụ atọ aha ya bụ Lara Ribeiro, Adriano Ribeiro Júnior na Sophia Ribeiro.
Eziokwu na-egosi Adriano bụ ezigbo nna.
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Nkwụsị Ya (Mwute)
Mgbe nna ya nwụsịrị, ajọ ọdachi na ogologo oge dugara Adriano na nso ọnwụ ọnwụ na mmalite nke ịda mba na ịda mba.
Adriano Depression Akụkọ - Fda Emperor.
Papa ya nwụrụ 3TE August, 2004. Mmezu Adriano malitere ịhapụ 2006 ka ọ ka na-enwe nkụda mmụọ.
As Javier Zanetti ozugbo a kọwara na nyochaa:
“Ozugbo ọ bịarutere na Inter, o jiri Real Madrid merie ihe mgbaru ọsọ nke ike dị egwu. N'ime m m kwuru, nke a bụ ihe ọhụrụ Ronaldo, o nwere ihe niile. Nkịtị, talent, ọsọ. Ma, Adri si na favelas pụta ma mee ka ụjọ jide m. Ahụwo m ihe ize ndụ nke ịba ọgaranya na ndị na-enwebeghị ihe ọ bụla. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla n'ọgwụgwụ ọzụzụ ahụ, ajụrụ m, “Gịnị ka ị na-eme n'abalị a? Ebee ka ị na-aga?". Jọ tụrụ m na ọ ga-emerụ ya ahụ na nsogbu ụfọdụ. Adriano nwere nna nke chebere ya nke ukwuu ma mara otu esi etinye ya n'ahịrị. Mana tupu mmalite nke oge, ihe a na-ekweghị ekwe mere. Ha kpọrọ ya na Brazil wee nye ya ozi gbanwere ọnọdụ obi ya: Mgbe m nụrụ, “Adriano, Papa anwụọla.” Ahụrụ m ya ka ọ nọ na-ebe ákwá, na-atụda ekwentị ya na iti mkpu ka o nwere ike.
Ka ọ dịgodị mgbe nna ya nwụsịrị, Adriano nọgidere na-egwu egwu, na-akanye ma rara nna ya ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ọ na-eme nke ahụ site n’ile anya ya na ịtụ aka ya n’ekpere n’eluigwe.
Otú ọ dị, oku ekwentị ahụ mere ndụ ya ogologo oge otu. Adriano ka na-ada, ọ kwụsịghị ịda mbà n'obi. Ọ ghọrọ otu Emperor na-efu talent.
Nke a bụ mkpịsị aka dị n'ime akpati nke kpakpando mara mma nke nwere ụwa n'oge ụkwụ ya.
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Ọdịda nke Emperor
Na mberede, afọ 22 ghọrọ onyeisi ezinụlọ mgbe papa ya nwụsịrị. A hapụrụ ya na ndị ọ hụrụ n'anya dabere na ya. Ọ bụ ọnọdụ dị otú ahụ nke ọ gbalịsiri ike ime mgbanwe, ma na nke onwe ya na nke ndụ ọkachamara
Ọ na-aṅụ mmanya na-aba n'anya dị ka ụzọ isi zere ịda mbà n'obi. Inter gbalịrị idozi nsogbu Adriano site n'ikwe ka ọ gaa Brazil.
Akụkọ Adriano Depression Akụkọ- Ọdịda nke Emperor.
Ọbụna mgbe ọ gara, ọ pụghị ịnagide nrụgide ahụ, na mwute, ọ gaghị enwe ike na ndụ ya. Ihe nile dakwasịrị ya.
Ọlaghachi na Europe dugara na Rome na oge 2010/2011. N'ihi enweghị ike imeri mmanya na-aba n'anya, Roma kwụsịrị nkwekọrịta ahụ na Machị 8, 2011 mgbe ọnwa asaa gachara na isi obodo Italy.
Ọbụna mgbe ọ nọrọ na Kọrịnt, Adriano ka nwere nsogbu. Nke mbu, ọ gbajiri akwara Achilles ya na Eprel 19, mgbe ọ na-azụ ọzụzụ. Mgbe a wachara ya ahụ, ọ nọrọ ọnwa isii iji gbakee.
Mgbe ọ gbakere, ọ na-egwu egwuregwu mbụ ya maka ndị Kọrịnt na Ọktoba 9, 2011. Na 12 March 2012, ndị Kọrịnt hapụrụ Adriano, mgbe ọ pụtara oge ọhụụ, ọtụtụ ịdọ aka ná ntị na-emebi, na-a drinkụ mmanya ọ bụla n'oge niile na enweghị mmasị na football.
Adriano Downfall- Fda Emperor.
Oge a, ọ dabara n'ọnọdụ jọgburu onwe ya nke ịda mbà n'obi na mmanya.
Gịnị mere Adriano? Ise siga, rinkụọ na mmanya na-aba n'anya.
Nke a bụ njedebe nke Adriano. Mbega ya na Atletico Paranaense na Miami United enweghị ike ịga nke ọma.
Adriano Childhood Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu:Enweghị ike ịgbanwe Ronaldo de Lima na Ibrahimovic
Adriano chere na ọ ga-anọchite anya ya Ronaldo na Brazil mba otu. Mana Dunga, Brazil nchịkwa, anaghị amasị Adriano, ma na-akatọ ya.
Ọ bụkwa ihe dị n'etiti Ronaldo na Ibrahimovic. O nwere ihe niile, ọbụnadị ike nke ịbụ onye ka mma karịa ha.
Adriano emeghị ka ndị ikom a.
Oge a mara mma, ọhụụ, na nke oge a striker, bụ onye jikọtara ike na nkà na ụzụ nke ọma magburu ndị agbụrụ ya na ndị football.
ADRIANO KA Nọgidere Akụkọ Ochie na Otu Ndị Nọ n’Afọ Nkwado AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ NKE AKỤKỌ